Kenya oo malaayiin dollar ku bixisay dacwada ka dhanka ah badda ee kala dhaxeysa Soomaaliya | Aftahan News
Nairobi (Aftahannews) – Xilli kiiska muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya uu marayo meel xasaasi ah ayaa waxaa soo baxaysa qiimayn lagu samaynayo dhaqaalaha ku baxaya dacwadaasi.
Sida ku cad qiyaasta miisaaniyadda sanadkan dowladda Kenya ayaa kordhinaysa lacagaha dhanka sharciga oo imika ah 1.7 bilyan oo shilinka Kenya ah, waxaana sanadkan la gaadhsiinayaa 2 bilyan oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta 20 milyan oo doolar.
Kiisaska muranada ee la geeyo maxkamada caalamiga ah ee ICJ ayaa go’aan ka gaadhistooda waxay qaadataa muddo sanado ah.
Muranka dhanka badda ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa saamayn ku yeeshay baadhitaannada dhanka shidaalka iyo Gaaska ee laga samaynayay goobaha badda ee lagu muransan yahay.
Bishii February, Kenya ayaa dib ugu yeedhatay safiirkii ka fadhiya Muqdisho ka dib markii sida la sheegay ay dowladda Soomaaliya “xaraashtay qaar ka mid ah buqcadihii lagu muransanaa”.